सफलताको सूत्र सँगै एक कथा..... हतारमा नलिनू कुनै फैसला ! -
सफलताको सूत्र सँगै एक कथा….. हतारमा नलिनू कुनै फैसला !
तर, जो पनि मानिस सफल भएका छन् भने उनीहरुले कुनै पनि निर्णय हतारमा लिएका छैनन् । सफलताको दौडमा हतारमा निर्णय लिनेहरु हतारोको शिकार बन्न सक्छन् । हतारमा गरेका कतिपय निर्णयका कारण पछिसम्म पनि पछुताउनु पर्ने हुन्छ । त्यसैले मानिसले समय लिएर निर्णय लिनु पर्छ । यसका लागि आफ्नो क्षमता परख गर्न पनि सकिन्छ । फैसला लिनुभन्दा पहिले विभिन्न परिस्थितिको पनि आँकलन गर्नु पर्ने हुनसक्छ । फैसला वा कुनै निर्णयका कारण कोही व्यक्तिको जीवनमा ठूलो परिवर्तन आउन सक्छ । त्यसैले जीवनमा सफल हुन र लामो रेसमा सहभागि हुनका लागि तत्काल कुनै पनि विषयमा फैसला लिइहाल्नु हुँदैन ।
मेरो जन्म एक सामान्य परिवारमा भएकोले पनि होला परिवारको ईच्छा छोरोले सरकारी जागिर खाओस् भन्ने थियो । म आफैँलाई पनि विदेश जानुभन्दा नेपालमै बसेर नै जागिर खाने अथवा अन्य केही काम गर्ने सोच थियो । सरकारी जागिरे नै नभए पनि जे गर्छु नेपालमै गर्छु भन्ने थियो । नेपालमा अन्य क्षेत्रको तुलनामा निजामती सेवालाई सुरक्षित भविष्य भएको आकर्षक क्षेत्र मानिन्छ ।
त्यही कारणले होला, मेरो पनि सानैबाट निजामति सेवाप्रति झुकाव रह्यो । जनताको नजिक रहेर सेवा प्रवाह गर्न सकिने, सेवा प्रवाहको सिलसिलामा देशको भौगोलिक, सांस्कृतिक पक्षहरूलाई जान्न र बुझ्न सकिने, साथै आफ्नो व्यक्तित्व विकासका अन्य अवसरहरू पनि निजामति सेवामा लागेपछि उपलब्ध हुने एक किसिमको लोभले गर्दा म यो क्षेत्रमा आकर्षित भएको हुँ ।
प्रयासः सफलताको सूत्रः
मसँग एउटा मीठो सम्झना छ । क्याम्पस पढ्दाताका सरहरूले नेपालमा जागिर खाने भए “कि राष्ट्र खानु कि परराष्ट्र खानु” अर्थात् नेपाल राष्ट्र बैंक वा परराष्ट्र सेवामा जागिर खानु भन्ने गर्नुहुन्थ्यो । तर, तयारी नपुगेको कारणले राष्ट्र, परराष्ट्रचाहिँ खान सकिएन । व्यवस्थापनमा संकायबाट स्नातक तहको अन्तिम वर्षको परीक्षा सकेपछि २०७२ सालमा नायब सुब्बाको परीक्षा पहिलो प्रयासमा नै उत्तीर्ण हुन सफल भए ।
त्यसपश्चात नेपाल लेखापरीक्षण सेवाअन्र्तगत महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा सिफारिस भएँ । त्यसपछि निजामती सेवालाई नै आफ्नो करियर बनाई माथिल्लो पदसम्म पुग्ने सोचले शाखा अधिकृतको तयारी गर्ने थालँे । पहिलोपटक विभिन्न कारणले गर्दा राम्रोसँग तयारी गर्न सकिनँ र असफल भएँ । कार्यलयको काम र अध्ययन दुवै एकैपटक अगाडि बढाउन पक्कै पनि गाह्रो हुन्छ तर आफूलाई त जसरी नि अधिकृत हुन थियो ।
अनि दोस्रोपटकमा अघिल्लोपटकका गल्ती तथा कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै थप मेहनतका साथ तयारी अगाडि बढाएँ । यसक्रममा महालेखा परीक्षकको कार्यालयका साथीहरू तथा आफू कार्यरत रहेको आफ्नो शाखाबाट पूर्णरुपमा सहयोग र हौसला निरन्तर रुपमा प्राप्त भइरहयो । यसपटक तयारी राम्रो गरेको र सबै परीक्षाहरू पनि राम्रो भएकोले आफैँलाई आत्मविश्वास थियो नाम निस्केला भन्ने, तर दोस्रो प्रयास पनि असफल भयो । तर, मैले हरेस खाइनँ । मलाई त निजामति सेवामै माथिल्लो तहहरू उक्लिदै जानु थियो ।
एउटा स्तरको तयारी पुगिसकेकाले सफल अवश्य भइन्छ भन्ने आत्मविश्वास आफैँभित्र पलाउन थालिसकेको थियो । जसको फलस्वरुप तेस्रो प्रयासमा आफुलाई नेपाल सरकारको शाखा अधिकृतको रुपमा उभ्याउन सफल भएँ । जतिबेला मेरो उमेरले २७ बसन्तहरू हेरिसकेका थिए ।
लोकसेवा तयारी कस्तो ?;
परिवारमा मअघि सरकारी सेवामा कोही पनि संलग्न नरहेकोले गर्दा सुरुसुरुमा तयारी गर्न एकदमै गाह्रो भयो । कोही तयारी गर्ने तरिका अथवा केही सिकाउने व्यक्ति नहुँदा जे पनि गाह्रो भइदिन्छ । फेरि लोकसेवा पास गर्न एकदमै कठिन छ, सकिँदैन भनेर भन्नेहरूको जमात पनि कम थिएन । क्याम्पस पढ्दादेखि नै नियमित पाठ्यपुस्तकभन्दा बाहिरका पुस्तक, पत्रपत्रिका पढ्न रुचि राख्ने भएकोले पढ्ने बानी राम्रै बसेको थियो । तर लोकसेवाको पढाइ र परीक्षा प्रणाली क्याम्पसको भन्दा फरक भएकोले गर्दा केही असहज पक्कै भयो ।
तयारीको क्रममा फरक विषयलाई फरक फरक तरिकाले पढ्ने गर्दथेँ । जस्तोः कुनै मिति सम्झिनु पर्दा आफ्नो जिवनमा घटेका अविस्मरणीय घटना तथा घरपरिवार र साथीभाइको जन्ममिति आदिसँग लिंक गरी पढ्दा सम्झिन सजिलो हुने र दिगो पनि हुनेगर्दछ । पाठ्यक्रमका विषयवस्तुलाई गीत, कविता तथा रमाइलो सूत्रमा ढालेर पढ्दा पढाइको तनाव पनि कम हुने र दिगो पनि हुनेगर्दछ ।
यत्तिचाहिँ बुझ्न जरुरी छ कि लोकसेवाको परीक्षा केही दिन वा केही रातको तयारीले उत्तीर्ण गर्न सकिँदैन । यसको लागि निश्चित समयतालिका बनाएर अध्ययन गर्नुपर्दछ । कति समय पढ्ने भन्दा पनि कसरी पढ्ने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यही भएर तयारी गर्दा त्यस्तो विशेष समयतालिका तथा दिनमा यति नै घण्टा पढ्छु भनेर कुनै नियम त बनाएको थिइनँ, तर जति समय पढे पनि आफ्नो शतप्रतिशत ध्यान दिएर पढ्ने गरेको थिएँ । त्यही कारणले गर्दा सफलता प्राप्त भएको हो जस्तो लाग्छ । तर, मैले नै अपनाएको तरिका सबैका लागि उपयोगी नहुन पनि सक्छ ।
शाखा अधिकृतको अन्तिम नतिजा प्रकाशन हुँदा म दशैँ मनाउन घर बिराटनगर जाँदै थिएँ । सिन्धुली जिल्लाको चियाबारी भन्ने ठाउँमा पुगेको बेला अफिसकै एकजना साथीले ‘धेरै धेरै बधाई छ, शाखा अधिकृतमा तपाईँको नाम निस्कियो’ भनेपछि एकदमै खुशी भएँ । कुनै सीमा नै बाँकी रहेन । जीवनका विभिन्न खुड्किलाहरूमध्ये एउटा ठुलो खुड्किलो पार गरेजस्तो लाग्यो । निरन्तरको मिहेनत, लामो प्रतीक्षा, अनि धैर्यताले पूर्णता पाएजस्तो अनुभूति भयो । साथै आफूमा केही जिम्मेवारी पनि थपिएको बोध भयो ।
लोकसेवाको तयारीमा हुनुहुन्छ ?
लोकसेवामा मात्र नभई अन्य क्षेत्रमा पनि सफलता प्राप्त गर्न आवश्यक सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा आत्मविश्वास र निरन्तरको मिहेनत नै हो । पहिलोपटकमै लोकसेवा उत्तीर्ण गर्नु पक्कै पनि राम्रो कुरा हो । तर एकदुईपटक असफल हुँदैमा हरेस खानु हुँदैन । प्रत्येक पटकको असफलताले केही न केही सिकाउँछ । असफलताबाट पाठ सिक्दै निरन्तर मिहेनत गर्न सके लोकसेवा आयोगको परीक्षा पास गर्न असम्भव भने छैन ।
लोकसेवा तयारीको लागि निश्चित समय आवश्यक पर्दछ । धेरै पढ्ने भन्दा पनि आफूसँग भएको सीमित समयलाई प्रभावकारीरुपमा व्यवस्थापन गरेर अध्ययन गर्न सके अवश्य पनि सफल भइन्छ । बजारमा उपलब्ध पुस्तकहरूमा मात्र भर नपरी पाठ्यक्रमसँग मिल्दो विषयका सन्दर्भ सामाग्रीहरू संकलन गरी अध्ययन गर्नुपर्दछ । पत्रपत्रिका, नेपाल सरकारका विभिन्न प्रकाशनहरू, वेबसाइट तथा इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालमा उपलब्ध हुने सामाग्रीहरू संकलन गरी अध्ययन गर्नुपर्दछ । आई.क्यू. र अंग्रेजी तयारीका लागि मोबाइल एपहरू पनि उपलब्ध छन्, तयारीका क्रममा जसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ । सामान्य ज्ञानको लागि साथीभाइसँग बसेर समूहमा अध्ययन गर्दा प्रभावकारी हुन्छ ।
लोकसेवा आयोगको परीक्षा पास गर्न अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको लेखनशैलीमा सुधार हो । लेखनशैली सुधारका लागि पढ्दै लेख्ने बानी गर्ने, लोकसेवा आयोगले सोध्न सक्ने सम्भावित प्रश्नहरूको उत्तर लेख्ने अभ्यास गर्ने, तयारी कक्षा सञ्चालन गर्ने, इन्स्टिच्युटमा गई अभ्यास गर्नेजस्ता विधि अपनाई लेखाइलाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ।
(बिराटनगरमा जन्मिएका मेघ गौतम हाल उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, प्रदेश नं. ३ अन्तर्गत साखा अधिकृतका रुपमा कार्यरत छन् । उनी विगत ९ महिनादेखि शाखा अधिकृत पदमा प्रशासन सेवा सामान्य प्रशासन समूह अन्र्तगत कार्यरत छन् । प्रस्तुत छ उनै गौतमको लोकसेवा तयारी अनुभव तथा सफलताको कथा ।)
झगडा नगरी जीवन बिताउनका लागि जोडीले पढनैपर्ने यी ५ उपायहरु !
कतै तपाईको पनी ब्लुटुथ खुल्लै त छैन ? विचार गर्नुस है यस्तो सम्म हुदो रहिछ ।